Cadaaladda Ajandaha Cadaaladda 2021 ▷ ku cusbooneysii HALKAN! | Sameynta iyo daraasadaha
Markaan ka fekereyno ka shaqeynta jagooyinka kala duwan ee Maamulka Caddaaladda, waa inaan dhowr ku bixino cadaalad diidka. Kuwaas waxaa ka mid ah, waxaan helnaa saddex jago oo aan tixgelin siinno oo aan maanta si qoto dheer ugala hadli doonno, si aad ugu diyaar garowdo imtixaannadaada sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan.
Ajendaha mucaaradka cadaalada
Maareynta habka - Ujeedka lacag la'aanta ah
Waxaa ku jira manhajka, imtixaannada, fikradaha wax ku oolka ah, imtixaannada jeesjeeska ah iyo helitaanka ilaha internetka ee bilaashka ah.
Iibso Vol. I>
Iibso Vol. II>
Iibso Vol. III>
Imtixaan Jees ah>
Fikradaha Ficilka ah>
Koorsada khadka tooska ah>
Maareynta nidaamka - Dhiirrigelinta gudaha
Habraaca habka - U jeedin bilaash ah
Habsocodsiinta nidaamka - Dhiirrigelinta gudaha
Nidaamka Maamulka iyo Maaraynta
Kuwaas mucaaradka ayaa ka tirsan Kooxda A2Sidaa darteed, si aad awood ugu yeelatid inaad iyaga u bandhigtid iyaga, waxaad u baahan tahay Dibloomo, Injineeriyada farsamada ama wixii la mid ah Intaas waxaa sii dheer, waa inaad ka weyn tahay 18 sano jir, dhalashada Isbaanishka, looma qalmo inaad qabato howlaha sidoo kalena aadan haysan diiwaan.
Tirada goobaha ayaa kusii kordhayay baaritaanka garsoorka. Marka ma aha oo kaliya inay diiradda saarto jirka Maamulka Habka, laakiin labada kale. Sannadkii 2016 tiro aad u tiro badan ayaa la helay, halka 2017 in ka badan 3.500. Halka 2018 3.593 lasiiyay. Sida muuqata, warka wanaagsan ayaa ah in goobihii ay ku ururayaan. Marka bilowga 2019, wicitaan cusub ayaa soo muuqan doona, oo leh rikoodh meelaha ah.
Waxaa lagu qiyaasaa in imtixaanada isla waxay dhacaan bartamaha sanadka 2019, sidii dhacday sanadihii hore. Waa run in dhammaan xogtan oo qaab qaabeed ah ay daboolayaan saddexda hay'adood ee ugu waaweyn ee mucaaradka garsoorka. Sababta oo ah Nidaamka Maareynta, boosaska waxyar ayey hoos u dhacaan. Dhamaantood, 506 kaliya ayaa loo yeeray.Hadda waxaa haray oo keliya in la sugo yeerista cusub ee aad ka heli karto bogga Wasaaradda Cadaaladda.
Qaybta I: sharciga dastuurka, xuquuqda aasaasiga ah iyo abaabulka Dawladda.
Mawduuca 1: Dastuurka Isbaanishka ee 1978.
Mawduuca 2: Xaqa sinnaanta iyo takoor la'aanta. Tallaabooyinka kahortagga xadgudubyada jinsiga.
Mawduuca 3: Dowlada iyo Maamulka.
Mawduuca 4: Abaabulka Gobolka.
Mawduuca 5: Midowga Yurub.
Qeybta II: Abaabulka iyo qaab dhismeedka garsoorka.
Mawduuca 6: Awoodda Garsoorka
Mawduuca 7: Abaabulka iyo awooda maxkamadaha iyo maxkamadaha I.
Mawduuca 8: Abaabulka iyo awooda maxkamadaha iyo maxkamadaha II.
Mawduuca 9: Caddaaladda Nabadda.
Mawduuca 10: Xuquuqda muwaadinka cadaaladda horteeda.
Mawduuca 11: Casriyeynta xafiiska garsoorka: xafiiska garsoorka cusub.
Mawduuca 12: Xoghayaha garsoorka.
Mawduuca 13: Qeyb ka mid ah shaqaalaha rayidka ah oo u adeega Maamulka Cadaalada.
Mawduuca 14: General Corps I
Mawduuca 15: General Corps II.
Mawduuca 16: Xorriyadda Syndical. Xaqa shaqo-joojinta Caafimaadka iyo ka hortagga khataraha shaqada.
Qeybta III: Dacwadaha sharciga ah
J) Xeerarka guud ee dhammaan dacwadaha madaniga ah.
Mawduuca 17: Su'aalaha guud ee ku saabsan geeddi-socodka madaniga I
Mawduuca 18: Su'aalaha guud ee ku saabsan geeddi-socodka madaniga II
Mawduuca 19: Xukun iyo xukun.
Mawduuca 20: Goobta iyo waqtiga dacwada garsoorka.
Mawduuca 21: Hawlaha garsoorka iyo karraaniinta maxkamadaha.
Mawduuca 22: Falalka xiriirka ee maxkamadaha kale iyo maamulada.
Mawduuca 23: Falalka xiriirka ee dhinacyada iyo ka qaybgalayaasha kale ee hawsha.
Mawduuca 24: Gal garsoor iyo dukumiinti.
B) Nidaamka madaniga ah
Mawduuca 25: Habka qeexidda ee Xeerka Nidaamka Madaniga ah.
Mawduuca 26: Maxkamad caadi ah.
Mawduuca 27: Xukun afka ah.
Mawduuca 28: Habsocodyada gaarka ah I: Nidaamyada qeybsiga garsoorka ee hantida.
Mawduuca 29: Hababka gaarka ah II: Lacag bixinta habka lacag bixinta iyo xukunka isdhaafsiga.
Mawduuca 30: Hababka guurka iyo casharadooda. Nidaamka curyaaminta dadka.
Mawduuca 31: Nidaamyada ikhtiyaari ikhtiyaari ah.
Mawduuca 32: Kheyraadka.
Mawduuca 33: Kheyraadka aan caadiga ahayn.
Mawduuca 34: Dil toogasho ah.
Mawduuca 35: Fulinta lacagta.
Mawduuca 36: Nidaamka fulinta.
Mawduuca 37: Dil toogasho aan lacag ahayn.
Mawduuca 38: Tallaabooyin taxaddar leh.
Mawduuca 39: Kharashaadka iyo kharashaadka habraaca.
C) Diiwaanka Madaniga ah
Mawduuca 40: Diiwaanka Madaniga ah I
Mawduuca 41: Diiwaanka Madaniga II
Mawduuca 42: Diiwaanka Madaniga III
D) Nidaamka ciqaabta
Mawduuca 43: Nidaamka nidaamka ciqaabta
Mawduuca 44: Qaybaha nidaamka ciqaabta.
Mawduuca 45: Soo Koobid.
Mawduuca 46: Tallaabooyin taxaddar leh.
Mawduuca 47: Muddo dhexdhexaad ah.
Mawduuca 48: Caddaynta.
Mawduuca 49: Nidaam loo soo gaabiyo.
Mawduuca 50: Habka dacwadaha degdegga ah loogu qaado dambiyada qaarkood.
Mawduuca 51: Nidaam ka hor maxkamada xeerbeegtida.
Mawduuca 52: Ilaalinta garsoorka maxkamadaha tacadiyada ka dhanka ah haweenka
Mawduuca 53: Habraacyada mas'uuliyadda ciqaabeed ee qofka yar.
Mawduuca 54: Ka shaqeynta maxkamadeynta dambiyada fudud.
Mawduuca 55: Nidaamka guud ee racfaanka ee dacwadaha ciqaabta ah.
Mawduuca 56: Fulinta xukunada ciqaabta ah.
E) Nidaamyada muran-maamulka iyo shaqada
Mawduuca 57: Racfaan muran-maamul leh I: Abaabulka xukunka.
Mawduuca 58: Racfaan muran-maamul leh II: Awood habraac, sharciyeyn, wakiilnimo iyo difaac. Falalka lagu tartami karo.
Mawduuca 59: Racfaan muran-maamul III: Dacwadaha hordhaca ah, xareynta racfaanka iyo sheegashada feylka. Goobta eedeysanayaasha iyo ogolaanshaha rafcaanka.
Mawduuca 60: Racfaan muran-maamul IV: Baahida iyo jawaabta. Tijaabi, arag iyo gabagabo. Jumladaha.
Mawduuca 61: Nidaamka loo soo gaabiyo aagga muranka-maamulka.
Mawduuca 62: Kheyraadka ku jira hannaanka muranka-maamul.
Mawduuca 63: Nidaamyo gaar ah.
Mawduuca 64: Shuruudo u badan nidaamyada muran-maamul.
F) Nidaamka muranka-maamulka iyo shaqada
Mawduuca 65: Nidaamka shaqada.
Mawduuca 66: Ka fogaanshaha hawsha.
Mawduuca 67: Hawlaha gaarka ah.
G) Xeerarka sharciga ganacsiga
Mawduuca 68: Tartanka amaahda.
Jimicsiga koowaad: Waa su'aalo badan oo xulasho ah, oo leh 100 su'aalood iyo 4 su'aalood oo keyd ah. Dhibcaha ugu yar waa 50 dhibcood waqtiga baaritaanka waa 90 daqiiqo.
Layli labaad: Waa kiis la taaban karo (ka hor intaysan noqon jimicsi saddexaad). Wadar ahaan 22 su'aalood, halka dhibcaha ugu yar ee laga gudbo ay noqon doonto 20 dhibcood tanna waxaan ku yeelan doonnaa kaliya 45 daqiiqo.
Jimicsi saddexaad: Qorista qoraal, halkaas oo aan ku qori doono laba mowduuc oo ay Maxkamaddu dooratay. Dhibcaha ugu yar waa 50 dhibcood si looga gudbo imtixaankan. Waxaan haysan doonaa 4 saacadood oo aan ku dhammaystirno.
Hadaad doorato Dhiirrigelinta gudaha, markaa waxaa jiri doona oo keliya laba jimicsi halkii laga dhigi lahaa saddex.
Jimicsiga ugu horreeya: Waa xulasho badan oo leh 50 su'aalood. Imtixaanku wuxuu soconayaa 60 daqiiqo natiijadaada ugu badana waa 100 dhibcood.
Layli labaad: 10 su'aalood oo looga jawaabo dacwad wax ku ool ah. Dhibcaha ugu badan waa 50 dhibcood iyo waqtiga la sameynayo, 60 daqiiqo.
Kadib marxaladda booska, wajiga labaad ee tartanka ayaa la gaarayaa, halkaas oo lagu tirinayo mudnaanta. Darajooyinka sharciga waxay ku darayaan 15 dhibcood, koorsooyin sharciyeed oo gaaraya illaa 29 saacadood, ku dar 3 dhibcood oo dheeri ah. Halka haddii koorsooyinkani yihiin min 30 ilaa 59 saacadood, markaa 5 dhibic ayaa lagugu dari doonaa. Ugu dambeyntiina, haddii ay ka badan yihiin 60 saacadood, markaa dhibcaha ayaa kor u kacaya ilaa 8. Luqadaha heerka B1 ama B2 waa hal dhibic oo dheeri ah. Laba dhibcood haddii aad leedahay C1 ama C2.
Shaqooyinka iyo mushaarka sarkaal ka tirsan Nidaamka Maamulka iyo Maamulka
Hawlaha aan iftiiminno:
Diyaarso qoraallo tixraac ah ama soo koobid baabuur
Ka shaqeynta nidaamka.
Saxeex oo cadee muuqaalka
Markaynu xusno mushaharka, waa in la sheegaa inay had iyo jeer ku tiirsanaan karto shaqada gaarka ah, xitaa maamulka Cadaaladda. Laakiin lacagta guud ee bil kasta waa qiyaastii 2.000 euro iyo 2.800 euro.
Mucaaradka Nidaamka Nidaamka
Xaaladdan oo kale, si aad u awoodo inaad gasho imtixaannada shaqsiyeed, baccalaureate ama wax u dhigma ayaa looga baahan yahay aqoonsi wuxuuna ka weyn yahay 18 sano jir. Sidii ay ahayd shuruudaha looga baahan yahay Nidaamka Mucaaradka Maareynta Habka.
I Qaybta abaabul
Mawduuca 1: Dastuurka Isbaanishka ee 1978
Mawduuca 2: Xaqa sinnaanta iyo takoor la'aanta ku saleysan jinsiga. Tallaabooyinka kahortagga xadgudubyada jinsiga.
Mawduuca 3: Dowlad iyo maamul.
Mawduuca 4: Abaabulka gobolka ee dastuurka.
Mawduuca 6: Awoodda Qareenka.
Mawduuca 8: Abaabulka iyo kartida maxkamadaha iyo maxkamadaha II.
Mawduuca 9: Xuquuqda muwaadinka cadaaladda horteeda.
Mawduuca 10: Casriyaynta xafiiska garsoorka: Xafiiska garsoorka cusub.
Mawduuca 11: Xoghayaha garsoorka.
Mawduuca 12: Hay'adaha shaqaalaha rayidka ah ee adeega cadaalada.
Mawduuca 13: Guud ahaan aniga
Mawduuca 14: Hay'adaha guud II.
Mawduuca 15: Xorriyadda Syndical. Xaqa shaqo-joojinta Caafimaadka iyo ka hortagga khataraha shaqada.
II Qaybta sharciga habraaca
Mawduuca 16: Habraacyada qeexida ee sharciga nidaamka madaniga ah: Maxkamad caadi ah iyo mid hadal ah.
Mawduuca 17: Nidaamyada fulinta ee nidaamka madaniga ah.
Mawduuca 18: Hababka gaarka ah ee sharciga nidaamka madaniga ah.
Mawduuca 19: Awoodda ikhtiyaari ikhtiyaari ah.
Mawduuca 20: Nidaamyada ciqaabta I: Caadiga ah, oo loo soo gaabiyo iyo xeerbeegtida.
Mawduuca 21: Dacwadaha ciqaabta II: Maxkamadeynta dambiyada kooban, maxkamadeyn deg deg ah iyo fulin.
Mawduuca 22: Racfaan khilaaf-maamul: Nidaam caadi ah, oo loo soo gaabiyo iyo mid gaar ah.
Mawduuca 23: Nidaamka shaqada: Nidaamka caadiga ah, ee shaqada looga joojiyo iyo hababka Lambarka Bulshada.
Mawduuca 24: Kheyraadka.
Mawduuca 25: Goobta iyo waqtiga dacwada garsoorka.Mawduuca 26: Howlaha garsoorka iyo karraaniyada maxkamada.
Mawduuca 27: Falalka xiriirka ee maxkamadaha kale iyo maamulada.
Mawduuca 28: Falalka xiriirka ee dhinacyada iyo ka qaybgalayaasha kale ee hawsha.
Mawduuca 29: Diiwaanka Madaniga ah I
Mawduuca 30: Diiwaanka Madaniga II
Mawduuca 31: Gal garsoor iyo dukumiinti.
Waxaan ogsoonahay in kabadan 2.000 oo boos in lasiiyey cadaalada. Laakiin si hufan jidhkan, habraaca habraaca, waxay gaadheen oo keliya ilaa 800 oo meelood. Dhamaantood, 56 waxay leeyihiin qodobo kaladuwan oo dhul qaybin ah.
Jimicsiga ugu horreeya
Qaybta I: Su'aalo-weydiinno badan oo xulasho leh oo leh 104 su'aalood. Iyadoo 4 ay noqon doonto keyd. Qaybtani waxay socotaa 75 daqiiqo waxaana lagu kala qaadaa 0 ilaa 100 dhibcood. Jawaabaha saxda ah waxay ku darayaan 1 dhibic, halka jawaabaha qaldan ay ku darayaan 0,25. Xusuusnow in kuwa aan laga jawaabin aysan dhalin.
Qeybta II: 22 su'aalo badan oo xulasho ah oo ku saabsan dacwad wax ku ool ah. Tijaabadani waxay socotaa 45 daqiiqo oo kala soocideedu waxay u dhaxaysaa 0 ilaa 40 dhibcood. Jawaab kasta oo sax ah waxay ku dari doontaa 2 dhibcood, jawaabaha qaldan waxay ka jarayaan 0,50 dhibcood. Halka jawaabta aan laga bixin, waxay noqon doontaa 0,25 dhibcood. Si aad uga gudubto imtixaankan waxaad u baahan tahay 20 dhibcood. Haddii kale, ma sii socon doontid layliga ku xiga ama qayb ka mid ah imtixaanka.
Waxay ku saabsan tahay qorista qoraal ku jira Ereyga. Xawaaraha iyo qaabka labadaba waa la qiimeeyaa. Waxaad haysataa 15 daqiiqo inaad ku sameyso qaybtaan. Dhibcahaagu waxay noqon doonaan 30 dhibcood.
ka meelaha laga heli karo dhiirrigelinta gudaha ee ka soo horjeedka nidaamka habraaca waa dhalinyaro. Waxaan haynaa 219 meelood, oo loo qaybiyo beelo kala madax bannaan. Si loo helo dallacaadda gudaha waxaa sidoo kale jira shuruudo taxane ah:
Inuu lahaado shahaadada koowaad ee bachelorka ama farsamada.
Inaad noqoto shaqaale dawladeed oo ka tirsan waaxda gargaarka garsoorka.
Aqoonsiga waayeelnimo illaa labo sano, ama shaqaale dowladeed, ku meel gaar ama badel.
Imtixaanka dallacaadda gudaha wuxuu ka koobnaan doonaa laba jimicsi:
Jimicsiga ugu horreeya: 50 su'aalo xulasho badan. Waxaad haysan doontaa 60 daqiiqo oo aad ku dhammaystirto qaybtaan. Jawaab kasta oo sax ah waxay ku dareysaa laba qodob, jawaabta qaldan waxay ka goysaa 0,5 dhibcood.
Layli labaad: Ku qoro qoraalka Microsoft Word kombiyuutarka. Tijaabadani waxay socotaa 15 daqiiqo. Maxaa lagu qiimeeyaa? Labada qaab iyo xawaaraha qoraalka iyo horumarka.
Dhibcaha ugu dambeysa, wadarta layliyadaan ayaa la sameyn doonaa. Laakiin waa in la tixgeliyaa in mudnaanta booska laga qabanayo la qiimeyn doono, iyo sidoo kale aqoonsiyo kale ama koorsooyin la oggolaaday.
Hawlaha loo qabanayo jirka Nidaamka Habka
Diyaarinta daqiiqadaha, iyo sidoo kale ogeysiisyada ama dacwadaha.
Ka shaqaynta arrimaha kala duwan ama ballamaha.
Sida jirka kale ee mucaaradka cadaalada, mushaarka ugu dambeeya had iyo jeer wuu kala duwanaan karaa. Laakiin waa in la yiraahdaa kan mushahar guud iyo bille ah waxay noqon kartaa qiyaastii 1800/2400 euro.
Mucaaradka kaaliyaha garsoorka
Xaaladdan oo kale waxaan wajahaynaa a tartamada group C2. Taasi waa sababta aan u heli karno iyaga, waxaan u baahan doonnaa arday ka qalin-jabiyay dugsiga ama shahaadada u dhiganta. Si la mid ah kuwii hore, waa inaad 18 jir tahay oo aad heysataa dhalashada Isbaanish.
Marka lagu daro qodobbada guud ee la wadaagaya kuwii hore, waa in la sheegaa in Mucaaradadii Taakulaynta Garsoorka ay ahaayeen ilaa 525 kursi. Wadar ahaan 37 ka mid ah 525-ka ayaa horeyba loo sii haystay inta hartayna mar labaad ayaa loo qaybiyey hareeraha qaranka.
Waxaan Qeyb ka ahay ururka
Mawduuca 9Axdiga xuquuqda muwaadinka cadaaladda ka hor.
Mawduuca 10: Casriyaynta xafiiska garsoorka.
II Xeerka Habka
Mawduuca 16: Nidaamyada kala-soocidda: Maxkamad caadi ah, tijaabo hadal ah iyo habab gaar ah.
Mawduuca 17: Nidaamyada fulinta: mid lacageed iyo mid aan lacag ahayn.
Mawduuca 18: Dacwadaha ciqaabta ah: Caadiga ah, oo loo soo gaabiyo, maxkamadeynta dambiyada fudud iyo xeerbeegtida.
Mawduuca 19: Nidaamyada muranka-maamulka leh: ee caadiga ah, oo loo soo gaabiyo oo gaar ah.
Mawduuca 20: Nidaamka shaqada - Nidaamka caadiga ah iyo shaqo ka joojinta. Hawlaha amniga bulshada.
Mawduuca 21: Goobta iyo waqtiga dacwada garsoorka.
Mawduuca 22: Howlaha garsoorka iyo karraaniga maxkamada. Digreetooyinka Wasaaradda Maaliyadda.
Mawduuca 23: Falalka xiriirka ee maxkamadaha kale iyo maamulada.
Mawduuca 24: Falalka xiriirka ee dhinacyada iyo ka qaybgalayaasha kale ee hawsha.
Mawduuca 25: Diiwaangelinta madaniga ah.
Mawduuca 26: Fikradaha galka garsoorka iyo dukumiintiyada.
Xaaladdan oo kale, imtixaannada tartanka ee Karraaniga Garsoorka, waa inaad ku gudubtaa imtixaan oo keliya. Laakiin haa, waxay ka koobnaan doontaa laba qaybood ama laba jimicsi oo xisaabta lagu darsado.
Jimicsiga ugu horreeya: Tijaabo nooca aragtiyeed iyo baabi'inta. Waxay noqon doontaa xulasho badan oo leh 104 su'aalood. Afar iyaga ka mid ah ayaa sii ahaan doona keyd ahaan. Dhibcuhu wuxuu noqon doonaa 0 ilaa 100 dhibcood. Jawaabaha saxda ah waxay ku dari doonaan hal dhibic, kuwa khaldan waxay jareysaa 0,25 dhibic kuwa aan laga jawaabinna lama dhalin doono. Waxaad haysataa qiyaastii 75 daqiiqo inaad ku dhammaystirto qaybtaan imtixaanka.
Layli labaad: Fikradda wax ku oolka ah. Waxaa jira 52 su'aalood guud ahaan, maadaama laba ka mid ah la keydiyay. Kuwa saxda ah waxay ku daraan laba dhibcood, kuwa aan sax ahayn waxay ka jaraan 0,5 dhibcood. Qeybtaan, waa in lagu xisaabtamo in su'aalaha aan laga jawaabin ama maran ay yareyn doonaan 0,25. Qaybtaan waxaad haysataa waqti ah 60 daqiiqo.
Haddii bulshada iskeed u degsan ay leedahay luuqad rasmi ah, waxaa jiri kara hal tijaabo oo kale oo luuqaddaas ah si loo hubiyo heerka ay gaarsiisan tahay. Tartamadaan ayaa sidoo kale leh 'wajiga tartanka'. Dhexdeeda, mudnaanta qofka ka soo horjeedaa waa la tixgelin doonaa (cinwaanno, dibloomooyin ama koorsooyin la oggolaaday).
Hawlaha la qabanayo iyo mushaharka Ciidanka Gargaarka Garsoorka
Hawlaha uu qaban karo kaaliyaha garsoorku, waxaan ku muujin doonaa waxyaabaha soo socda:
Nidaamku ha ahaado qolalka.
U hogaansanaanta deynta iyo sidoo kale sii deynta.
Waxay qaban karaan shaqooyin sida booliska garsoorka.
Faylka feylasha garsoorka.
Sida mushahar guud iyo bille ah, waa in la dhaho a sarkaal ka tirsan hay'adani wuxuu qaadi doonaa inta u dhexeysa 1600 euro iyo 2000 euro.